Tevera iyo yose Giro d'Italia pane yako iPhone skrini | IPhone nhau
Tevera iyo yose Giro d'Italia pane yako iPhone skrini
Zviri pachena kuti mujaho wakakosha kwazvo webhasikoro munyika ndeiyo Tour de France, asi pamwe yakanyanya kuomesa uye yakanakisa kune isu vedu vateveri vebhasikoro Italy inotenderera, iyo gore rino yatanga muNetherlands asi zvirokwazvo ichatifadza isu kunyanya kune nyika yebhoti.
1 VaGiro vese
Iko kunyorera kwakakosha kana iwe uchironga kuenderera nhangemutange, nekuti inotipa rinenge rese ruzivo rwatinoda nezvazvo. Pakutanga, inotarisa zvakanyanya padanho riri kutora nzvimbo nezuva rimwe chete, kugona kuona chimiro chayo, tarisa vhidhiyo, verenga pfupiso uye kunyange tevera kupatsanura munguva chaiyo nematanho anogona kuitika pakati pechikwata nevapukunyuka. Uye zvakare, inotipa mukana wekupfuura nepakati pemajezi kuti tione kuti vangatarise sei mushure mekupedza danho panguva yekubvunzana.
Kana danho rapera, tinogona kusarudza nakidzwa neapp mune dzimwe nzvimbo dzaanotipa, izvo zvinonakidza zvakafanana. Tinogona kutevera nzira kuti tione zviri kuuya, kucherechedza zvemultimedia (mapikicha nemavhidhiyo), kutenga muchitoro chepamutemo kana kuona mapikicha anotorwa nevatsigiri vogoverana muchikamu che "Zviso zveGiro".
Padanho rekugadzira, iko kunyorera kunoenderana nezvikamu zvakajeka zvinobvumidza kusvika kune mumwe munhu kuti neruzivo rushoma muhunyanzvi kugona kuishandisa pasina matambudziko. Pamwe iwe unogona kuisa asi muhukuru hwetsamba yemamwe magwaro, idiki zvakanyanya, asi sekutonga kwakawanda zvinopfuura kuzadzisa basa racho. Kune rimwe divi, zviripachena iro rakakurumbira ruvara rwekushandisa iri pink, chimwe chinhu chingatarisirwa mune iyo nhangemutange yeItaly.
Iko kwaunogona kuisa zvimwe asi zvimwe kune iko iko iko kuri mu kushanda. Kunyangwe ichifamba mushe, dzimwe nguva kana uchienda kune dzakasiyana zvikamu zvekushandisa pane chisingafadzi chinoonekwa chiitiko chinofanirwa kugadziriswa mune ramangwana kugadzirisa. Haisi Anwendung ine yakajeka graphic zvemukati kana advanced advanced, saka hapafanire kunge paine dambudziko rakakura kugadzirisa dambudziko rakadai.
Ehezve iko kunyorera kuri mahara uye kushaya kushambadza, chimwezve chikonzero chekuita kuti ive yakakosha pane yedu iPhone apo iyo Italian kutenderera kuri kuenderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Tevera iyo yose Giro d'Italia pane yako iPhone skrini
Kudya naTim Cook okisheni kunopera pa $ 515.000
WhatsApp inotangisa kushanda kwayo kwepamutemo kweWindows uye Mac OS